Apple September 15 Event မှာဘယ်လို Products အသစ်တွေကိုတွေ့လာရမလဲ?? — Anycall Mobile
By liam September 13, 20205Mins Read
Apple အနေနဲ့ လာမယ့် စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှာ Virtual Event တစ်ခုကိုကျင်းပပြီး သူတို့ရဲ့ Products အသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာဘယ်လို Products အသစ်တွေကိုမိတ်ဆက်လာမလဲဆိုတာကို Apple ဘက်ကကြေညာထားခြင်းမရှိပေမယ့် ကောလဟလတွေအရ Apple Watch Series6နဲ့ iPads အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့သိထားရပါတယ်။ အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ iPhone 12 Series ကတော့ အောက်တိုဘာလလောက်မှသာ မိတ်ဆက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။
ဒီ Article ထဲမှာတော့ ဒီ September 15 Event မှာ ‌Apple ဘက်နေမိတ်ဆက်လာနိုင်တဲ့ Products တွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Apple အနေနဲ့နှစ်တိုင်းမှာ Apple Watch အသစ်ကို မိတ်ဆက်လေ့ရှိတာမို့လို့ ဒီနှစ်မှာတော့ Apple Watch Series6ကိုတွေ့လာရတော့မှာပါ။ ဒီ Watch Series6ရဲ့ Design ကတော့ Watch Series5Design အတိုင်း ထွက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဆိုတော့နောက်ထပ် ဘာတွေများပြောင်းသွားမလဲ??
ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Performance နဲ့ Battery Life မှာ သိသိသာသာတိုးတက်လာမယ့် System-on-chip အသစ်ပါလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ နောက်ထပ် ပိုမြန်တဲ့ Wifi ၊ Cellular တို့နဲ့အတူ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Water Resistence တို့ပါလာနိုင်ပါတယ်။ Battery မှာတော့ 303.8mAh ပါလာမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ထားပါတယ်။အရင်က Series5မှာတော့ 296 mAh Battery ပါထားပါတယ်။
အရင်တုန်းကထွက်ထားတဲ့ ကောလဟလတွေအရ Series6မှာ သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ကိုတိုင်းတာပေးမယ့် Blood Oxygen Monitoring Feature ပါမယ်လို့သိရပါတယ်။ သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ကိုတိုင်းတာပေးမယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း Series6ဟာ သွေးထဲက အောက်စီဂျင် Levels တွေကိုတိုင်းတာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန် သွေးတွင်း Oxygen Level ဟာ 95 နဲ့ 100 % ကြားမှာရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ သွေးတွင်း Oxygen ဟာ 95% အောက်လျော့သွားရင် Health Isuuse တွေဖြစ်လာနိုင်ပြီး အမြန်ဆုံးကုသဖို့လို့လာမှာပါ။ ဒီလိုလျော့သွားတာနဲ့ Apple Watch Series6ကနေ Notificaton ပို့ပြီး အမြန်ဆုံးသတိပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ Users တွေအနေနဲ့ နီးစပ်ရာဆေးခန်းတွေကို အမြန်သွားပြလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Feature ဟာ အခုလို Covid-19 Pandemic မှာတော်တော်လေးအသုံးဝင်လာမှာပါ။ အကြောင်းကတော့ဒီ Coronavirus ဟာ သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ကိုလျော့ကျစေလို့ပါပဲ။
ဒီလိုသွေးတွင်း အောက်စီဂျင်ကိုတိုင်းပေးမယ့် Feature နဲ့အတူ Apple Watch Series6မှာ Panic Attack (ရုတ်တရက် အလွန်အမင်း စိတ်ပူပန်လာခြင်း) ဒါမှမဟုတ် Stress တွေများလာတဲ့အချိန်မှာ စိတ်သက်သာရာရဖို့ လုပ်သင့်တဲ့လေ့ကျင်းခန်းတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမယ့် Mental Health Capabilities တွေလည်းပါလာမှာပါ၊။
ဒီ Apple Watch Series6နဲ့အတူ ဈေးပိုသက်သာတဲ့ Watch SE ကိုပါတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။Watch SE အကြောင်းကိုတော့ ဒီ Link မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အရင်ကထွက်ထားတဲ့ သတင်းတွေအရ ဒီ iPad Air အသစ်ဟာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဒီ iPad Air ဟာ Touch ID ကို Home Button ပေါ်မှာတပ်ဆင်ပေးထားခြင်မရှိတဲ့ Apple ရဲ့ပထမဆုံး Device ဖြစ်လာနိုင်လို့ပါပဲ။ Home Button ပေါ်မှာမဟုတ်တော့ရင် Touch ID က Under Display ဒါမှမဟုတ် Side Button ဆီကိုများရောက်သွားမလား? စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ..
ဒီ iPad Air မှာ iPad Pro လို All-Display Design ပါလာဖို့ရှိနေပြီး Screen Size ကတော့ 10.8 နဲ့ 11 လက်မကြားမှာရှိလာနိုင်ပါတယ်။ iPad Pro‌ လိုပဲ iPad Air မှာ Lightning port အစား USB-C port ကိုတပ်ဆင်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခြား Features တွေအနေနဲ့ Magic Keyboard နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မယ့် Smart Connector ၊ Four Stereo Speakers နဲ့ A14 Chip တို့ပါလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီ iPad နဲ့ ပတ်သက်ပြီးအချက်တွေကတော့ iPhone 12 Series လိုအများအပြားမထွက်ထားတာမို့လို့ အပေါ်အချက်အနည်းငယ်ကိုပဲသိထားရပါတယ်။
ဒီ Apple One ဆိုတာကတော့ Apple Services တွေအကုန်ပေါင်းထည့်ပေးလာမယ့် Service တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Apple Services တွေထဲမှာဆို Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud, နဲ့ Apple News+. စတဲ့ Services တွေပါလာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် Fitness Service အသစ်တစ်ခုကို ပါလာဖို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ တကယ်လို့ Apple အနေနဲ့ ဒီ Apple One ကို Event မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့ရင် Fitness Service အသစ်ကိုပါ မိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Fitness Service ဟာဆိုရင် Fitness နဲ့ Workout Class တွေကိုပေးလာနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့များ iPhones တွေထွက်လာခဲ့ရင်…
အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း Apple September 15 event ဟာ iPad နဲ့ Apple Watch တို့ကိုပဲ အသားပေးထုတ်လာဖို့များပါတယ်။ နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလတိုင်းမှာ iPhone တွေကိုမိတ်ဆက်လေ့ရှိတာမို့လို့ ဒီ Event မှာ iPhone 12 Series ကိုတွေ့လာရနိုင်ခြေလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ကပ်စိုက်မှုတွေဖြစ်နေသေးတာမို့လို့ ဒီနှစ် Event ဟာလည်းပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။
အရင်တုန်းကထွက်ထားတဲ့သတင်းတွေမှာ Apple အနေနဲ့ iPhone 12 Series ထုတ်လုပ်မှုကို နောက်ဆုတ်လိုက်ရတာမလို့ October လလောက်မှာသာ iPhone 12 Series ကိုမိတ်ဆက်လာမယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ September Event ဟာ ‌iPad‌ ၊ Apple Watch တို့အတွက်သာဖြစ်လာနိုင်ပြီး နောက်လ October Event ကတော့ iPhone 12 Series အတွက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီသတင်းတွေသာမှားလာပြီး September 15 Event မှာ iPhone 12 Series ကိုမိတ်ဆက်လာခဲ့ရင်တော့ iPhone 12 Series မှာဘယ်လို Specs တွေပါလာမလဲ??
Apple အနေနဲ့ iPhone 12 Series ထဲမှာစုစုပေါင်း Models လေးမျိုးထုတ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဒီ Model ထဲမှာ ဈေးသက်သာတဲ့ Model နှစ်မျိုး နဲ့ ဈေးကြီးတဲ့ Pro Models နှစ်မျိုးပါလာနိုင်ပါတယ်။ ဈေးသက်သာတဲ့ iPhone Model နှစ်မျိုးကတော့ 5.4 inch နဲ့ 6.1 inch ဆိုပြီးထွက်လာနိုင်ကာ Pro Models တွေကတော့ 6.1 ၊ 6.7-inch ဆိုတဲ့ Screen Size တွေနဲ့ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
5.4-inch ‌iPhone‌ ကတော့ iPhone SE (2016) ပြီးရင် အသေးဆုံး iPhone ဖြစ်လာနိုင်ပြီး 6.7 iPhone ကတော့ iPhones တွေထဲမှာမှ အကြီးဆုံး iPhone ဖြစ်လာမှာပါ။
ဒီ iPhone အသစ် လေးမျိုးလုံးမှာ Edge-to-edge Display ၊ Face ID ပါတဲ့ Notches တွေပါလာမှာပါ။ဒီမှာ Notch တွေကအရင်ကလိုကြီးမနေတော့ဘဲ သေးသွားမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ထားပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖုန်းလေးလုံးစလုံးမှာ OLED Displays တွေကိုပဲသုံးပေးလာမယ်လို့သိထားရပါတယ်။ Pro Models တွေမှာတော့ iPad Pro မှာပါတဲ့ 120Hz ProMotion Display ပါလာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းကောလဟလတွေမှာတော့ 120Hz ပါမယ် ၊ မပါဘူး ဆိုပြီးအစုံထွက်လို့နေပါတယ်။
iPhone 12 Lineup ရဲ့ Design မှာတော့ iPhone6ကတည်းကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ Rounded Edges Design အစား iPad Pro‌ or ‌iPhone‌4တို့နဲ့တူတဲ့ Flat-edge Frame ကိုသုံးပေးလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ Pro Models တွေမှာတော့ Stainless Steel Frame နဲ့ကွပ်ပေးလာနိုင်ပြီး ဈေးသက်သာတဲ့ Models နှစ်ခုမှာတော့ Aluminum Frame နဲ့ကွပ်ပေးလာမှာပါ။ ဒီ Model လေးမျိုးစလုံးရဲ့ ရှေ့ဘက် Screen ကော နောက်ဘက် Design ကောမှာ Glass ကိုပဲသုံးပေးလာဖို့ရှိနေပါတယ်။
နောက်ကောလဟလသတင်းတွေအရ Pro Models တွေမှာ အရင်က Midnight Green အရောင်နေရာမှာ Navy Blue အရောင်ကိုအစားထိုးလာမယ်လို့သိရပါတယ်။ ရိုးရိုး Models တွေကတော့ iPhone 11 လိုပဲ အရောင်စုံထွက်လာနိုင်ပါတယ်။၊
ဒီ Trple Camera Setup ထဲမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာမယ့် Telephoto Lens နဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ Low-light ပုံတွေရဖို့ Smart HDR တို့ပါလာနိုင်ပြီး Ultra Wide-angel lens အတွက်လည်း Image Stabilization မှာ ပိုကောင်းလာမှာပါ။ Videos မှာတော့ Pro Models တွေဟာ 4K Videos တွေကို 120fps နဲ့ 240fps မှာရိုက်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။
Performance အတွက်တော့ iPhone 12 Models လေးမျိုးစလုံးမှာအားပိုသက်သာတဲ့ A14 5nm 5G Chipset နဲ့အားဖြည့်ပေးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Chip ဟာ 5G ရဲ့အားစားမှုကို ထိန်းပေးပြီး ပိုမိုကြာရှည်တဲ့ Battery Life ကိုပေးလာမှာပါ။ Performance ပိုင်းမှာသိသိသာသာတိုးတက်လာမှာကိုတော့ ပြောနေစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ RAM အတွက်တော့ Pro Models တွေဟာ 6GB RAM နဲ့ထွက်လာနိုင်ပြီး ရိုးရိုး Models တွေကတော့ 4GB RAM နဲ့ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို 5G Modem တွေဟာဈေးကြီးတဲ့အတွက် Apple အနေနဲ့ iPhone 12 Models တွေမှာ Power Adapter ဒါမှမဟုတ် Earpods တွေကိုထည့်ပေးမလာတော့ဘူးလို့သတင်းတွေထွက်ထားပါသေးတယ်။ Power Adapter အတွက် Apple ဘက်ကနေ 20W Adapter ကိုသီးသန့်ရောင်းချလာဖို့ရှိနေကြောင်းလည်း သိထားရပါတယ်။
နောက်ထပ် iPhone 12 Series အပြင် ဘာတွေများမိတ်ဆက်လာနိုင်မလဲ??
တစ်ခြား Products အတွေနဲ့ AirTags ၊ AirPods Studio နဲ့ ဈေးပိုသက်သာတဲ့ Home Pod တို့ကိုပါထပ်မိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်။
Apple September 15 Event မှာဘယ် Products အသစ်တွေကိုတွေ့လာရမလဲ??
Apple Watch Series6၊ iPad Air လား?? ဒါမှမဟုတ် iPhone 12 Series လား??
ကဲ လာမယ့် အင်္ဂါနေ့ ည ၁၁:၃၀ အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ..
Ref : macrumours
appleiPad AiriPhone 12 SeriesWatch Series 6